အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ညလယ်ယံမှ အသက်ရှူသံ
27 Responses to “ညလယ်ယံမှ အသက်ရှူသံ”
သရဲမဟုတ်တာ တော်လှပြီး)
လတ်စသပ်တော့ ကြောင်မလေးပါလား ...
သရုပ်ဖော်ပုံကို ကြည့်ပြီး သရဲလား ဘာလား ညာလားပေါ့ တွေးနေတာ။ ကုတင်ပေါ်ကဆင်းပြေးတဲ့ထိ အသက်ရှူနေတဲ့သူက ဘာမှမလှုပ်ရှားဘူးဆိုတော့ ပိုပြီး ဇဝေဇ၀ါဖြစ်မိသေးတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ အမှောင်ချထားလို့ ကြောင်မကို မမြင်ရတာကိုး ....
မချော ကျနော် လာမဖတ်ဖြစ်တာ ကြာသွားလို့ အခု ပြန်လာဖတ်တဲ့အချိန် မချော အေ၇းအသားတွေ အရမ်း အရမ်းကို တက်လာတယ် . . တကယ် ဆွဲဆောင်သွားနိင်တယ် . . . သိပ်ကောင်းတဲ့ အရေးအသားပါပဲ
သရဲမှတ်လို့ တထိတ်ထိတ်နဲ့ ဖတ်နေတာ နောက်ဆုံးတော့ ကြောင်ဖြစ်နေတယ်။ ဟားဟား။ ချောက တကယ်ရေးတတ်တယ်။ အရမ်းပီပြင်တာပဲ။
အသက်ရှူသံ ဆောင်းပါးကို ဖတ်သွားတယ် ချောရေ။ တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ ညဉ့်သန်းခေါင်ယံမျိုးမှာ ကြောက်စိတ်ဝင်ပြီဆိုတာနဲ့ ခြောက်လှန့်တဲ့စိတ်ရဲ့ တွန်းအားက ပိုများလာတာ သဘာဝပဲနော်။
အရင်ဆုံး သရဲ များလားလို့ ဟားးးးးးးးးးးးးးး
အသက်ရှူသံက ဘယ်သူများဖြစ်မလဲလို့. ကြောင်လေးတကောင်ပါလား
မိုက်တယ် မချောရေ..၊ စာကြောင်း တစ်ကြောင်းချင်းစီက ဇတ်ရှိန်ကို မြှင့်ယူသွားလိုက်တာ၊ အဆုံးသတ်မှာ ကြောင်ကို ရိုက်လိုက်တဲ့ ခပ်ဆတ်ဆတ် ရိုက်ချက်လေးက စာဖတ်သူကိုပါ သက်ပြင်းတွေ ပြုတ်ကျလာစေတယ်၊ ပြီးတော့လည်း “သြော်..ဒီလိုကိုး” ပေါ့လေ...၊း)
Your writing drag my thought to climix wondering what kind of........is it?Cats have heavy and rhythmic breath while they sleep.My sisters love cats and put them bottom of their beds.I always closed my bed room door not to come them in.
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ် အမ အဲလိုပဲ တစ်ခါတစ်လေ ဖြစ်တတ်တယ် :P
မချောတို့လည်း အဲလို အတည်ပေါက်နဲ့ နောက်တတ်တယ်နော်... :P
စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ ဖတ်လာလိုက်တာ နောက်ဆုံးတော့ ကြောင်တစ်ကောင်တဲ့။ ဟား ဟား (ခမန့်ရေးနေရင်းနဲ့ ရယ်သံထွက်ပေါ်လာမိသေးသည်)။ အင်မာဂျင်စီလိုက်ဆိုတာ ဓာတ်မီးတစ်မျိုးပဲလား ချော။ တကယ်မသိသေးလို့ မေးတာပါ။ ဟိ။ ကျန်းမာပျော်ရွှင် ကြည်လင်ဝင်းပ အေးမြပါစေ...
လျှို့ဝှက်သည်းဖို ပါလား ဗျာ..
ကြောင် အိုအို ဟောက်သမျှကို
ဘလောဂ် အမ မချောရယ်။
သတ္တိသွေး.. မွေး ရက်တယ်လေးးးးးးးး။း))
အဲလိုမျိုး ကိုယ်တိုင်ကြုံဖူးလို့ .. ကြောင်လေးဖြစ်နေမယ်ထင်တယ်လို့ တွေးနေတာ။ တကယ်ပဲ ကြောင်လေး ဖြစ်သွားတာကိုး..။ တော်သေးတယ်း))
ဆိုးလိုက်တဲ့အစ်မ ကြောင်လေး သူ့ ဖာသာ အိပ်နေတာကို အိပ်ရေးပျက်အောင်လုပ်တယ်...။ ဆက်အိပ်ပါစေလား။ ဒါ လူ့ အခွင့်အရေးချိုးဖောက်တာ.. အဲ.... ကြောင်အခွင့်အရေးချိုးဖောက်တာပဲ... တိုင်ရမယ်..။ ဟီးဟီး။
နောက်တာပါ အစ်မရေ...ကျနော် လည်း အဲ့လို ကြုံကြိုက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အတော်လေး လန့် သွားဖူးပါတယ်လို့.။
မ ချောရဲ့  လက်စ လက်န တွေ အခုမှ
သိလာရတော့ တယ်။ ရေးတာကောင်း
တော့ဖတ်တာလဲကောင်းဗျာ...။
ကြောင် ဆိုလို့ကျွန်တော်တော့ 
ကြောင်မချစ်၊ ခွေးပဲ ချစ်....။
စိတ်ခြောက်ခြားပြီး ကြောက်စရာကောင်းအောင်လုပ်တဲ့ ကြောင် တော်တော် ဆိုးတာပဲနော်...
ဂုတ်ကနေ ဆွဲပြီး ကိုင်ပေါက်လိုက်ရမှာ မွေ့ယာပေါ်ကို မသေအောင်လို့လေ... :)
ဟ...ဒေါ်ချောက ဒါမျိုးတွေလည်း ဖြစ်သားပဲ...Carry on...
တို့လဲ မီးမှောင်ရင် တအားကြောက်တတ်တယ်။ အပြင်အခန်းက မှောင်နေရင်လဲ မထွက်ရဲဘူး။ တော်သေးတာပေါ့ ။ ကြောင်လေးဖြစ်နေလို့။ ရင်တုန်ပန်းတုန်နဲ့ ဖတ်သွားပါတယ်။
ကြောင် နော် တယ်ဒီကြောင်
ဖတ်တဲ့သူတောင် တထိတ်ထိတ် နဲ့။
Hey Chaw, you got me!!! I was scared and even thought of stop reading to the end. Thank god, the cat saved me, hehe.
ကျနော်တော့ အဲဒါမျိုးတွေ မကြောက်ဘူးခင်ဗျ။ ခေါင်းရင်းမှာ မီးခလုတ်က လက်မှီနေလို့း)